Seeraan ala: President Lamma Magarsa fi Dr Abiyyii Ahmad sad 13,2017 – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSeeraan ala: President Lamma Magarsa fi Dr Abiyyii Ahmad sad 13,2017
Seeraan ala: President Lamma Magarsa fi Dr Abiyyii Ahmad sad 13,2017
Gabaasa ONN: Haala “Foollee” Shashamanee, Naqamtee fi Gimbii (update).
Kabajaa ayyaana Irreechaa bara 2017 milkeessuudhaaf jaarsoliin Abbaa Gadaa bakka bakkatti maqaa “Foollee” jedhuun dargaggoota ijaaruun ni beekama. Haa ta’u malee bulchitoonni naannoo Oromiyaa fi OPDOn of “haaromsaa” jirra jedhan kana keessa gugatanii jaarsolii hubannaa ga’aa hin qabneef fi isaaniif doorsifamanitti gargaaramuun bakka hundatti ijaarsa Foollee kana babal’isaa kan jiran yammuu ta’u Foollewwan ijaaraman kunis bakka hedduutti kanneen naamusa hin qabnee fi dalagaa isaaniif hin malle dalagaa waan jiraniif hojii qeerrootiif yaaddessaa ta’aa dhufaa jira. Magaalota dhiha Oromiyaa kanneen akka Naqamtee, Gimbii, Giddaa Ayyaanaa fi kkf fakkaatan keessatti Foollewwan ijaaraman utuu Poolisii Oromiyaa hin waamiin naamusaa ala nama argan kan doorsisan, reeban, kashalabboota maqaa “Foollee” kanaan OPDOn bobbaafte ta’uu gabaasni naannoo sanarraa arganne ni addeessa. Godina Arsiittis foolleewwan ijaaraman seeraan ala jiraattotaa fi kara- deemtota irratti saamicha maallaqaa geggeessaa jiru.
Video asii gadii kanarratti warri uffata adii uffattee konkolata jala fiigu sun foollewwan magaalaa Shaashamaneetti jarri ijaarte dha. Peestaalii qabatani maallaqa erga funaanuu jalqabanii har’a guyya shanaffa lakkaa’aa jira. Guyyaa tokkottii yoo xiqqaate birri 50,000 ol ni galchu. Kun ba’iinsa (exit) magaalaa Shaashamanee irraa gara Kofaleetti geessu duwwaarratti yammuu ta’u karaalee biroo irrattiis akkuma kanatti guuraa jirti. Haalli kun kan mullatu magaaloota Oromiyaa xixiqqoo fi gurguddoo ta’an cufaa irratti kan raawwatamaa jiru dha.
Egaa Foolleewwan kun akka kanatti seeraan ala naga’ee tokko malee peestaalaan akkuma argan kan maallaqa sassaaban, nama nagaa seeraan ala kan reeban (bakka tokko tokkotti hanga lubbuun namaa darbutti) yoo ta’e, sirna dhablummaan akkanaa kun sochii qeerroo naamusaan masakamu kan xureessu ta’uu caalaayyu sabboontonni ilmaan Oromoo kana keessa akka hin gaaga’amne waan sodaachisuuf ijaarsi “Foollee” kun dhaabbatee Poolisiin Oromiyaa akka seera kabajchiisu sabboontonni dhaammataa jiru.
Ummata nagaa: Qeerroon Jimmaa polisoonni feedraalaa wayyaanee